Motorola Milestone တွင် Android 2.0.1 မှ 2.1 ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ Androidsis
နီကိုလာ | | Motorola က
ငါသတင်းစာအယ်ဒီတာအသစ်အဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကို web ပေါ်တင်ရန်ဤသတင်းကိုယူသည်။ ငါ့တင်ဆက်မှုအတွက်ထိုက်တန်သောသတင်းတပုဒ်ကိုအချိန်အတော်ကြာရှာဖွေပြီးနောက်ငါအဓိကအားဖြင့်ပိုင်ဆိုင်သူတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်လိုက်သည်။ Motorola မှတ်တိုင်.
ငါမင်းကိုတင်ပြသည် အန်းဒရွိုက် 2.1 တရားဝင်အင်္ဂလိပ်ဂျာမန်နှင့်ဟောင်ကောင် ROMs မှ ported ။ ဒီ update နှင့်အတူသင်သည် Nexus ၏နာမည်ကြီး Live Wallpapers ကိုတက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ပြီးပြီဖြစ်သည်။
ROOT ACCESS လိုအပ် (သင်မည်သို့လုပ်ရမည်ကိုမသိလျှင်နှိပ်ပါ) ဒီမှာ)
- Android 2.1 မီဒီယာပြခန်း Multi-Touch နှင့်အတူ
Multitouch ကိုလက်သုံးချောင်းဖြင့်ဖွင့်ပါ (ကျွန်ုပ်သတိမထားမိသေးပါ)
-5အစား3စားပွဲခုံ
- စင်ကြယ်သော Windows5 စတိုင်ရှိ Desktop ၅ ခုကိုကြည့်ရန်
၎င်းသည်တရားဝင် update မဟုတ်သောကြောင့်၎င်းတွင်အချို့သောအမှားများရှိနိုင်သည်။ ယခုငါရာသီဥတုဝစ်ဂျက်မရှိကြောင်းနှင့်ဂူဂဲလ်ဘား၏မိုက်ခရိုသည်လိမ္မော်ရောင်ဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။
ဒီအပ်ဒိတ်ကိုအသုံးပြုတဲ့အခါ၊ အုတ်ခဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ငါ recovery တစ်ခု install လုပ်ပြီး nandroid backup လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုတယ်။ သင့်ရဲ့အန္တရာယ်မှာလုပ်ပါ။
သင်ဒီမှာလိုအပ်သောဖိုင်ကို download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
2nd ဤအပ်ဒိတ်ကို Apply
မှတ်သားသင့်သည်မှာဤ mod သည်ကျွန်ုပ်အားမဖွံ့ဖြိုးသေးပါ။ ငါတို့အားလုံးကိုကြွေးတင်နေသည် alldroid.org
ရုပ်ပုံအချို့ကို alldroid တွင်တင်ထားသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » [Mod] Motorola မှတ်တိုင်၌ Android 2.0.1 မှ 2.1 ကိုအဆင့်မြှင့်ပါ
တစ်စုံတစ် ဦး ကအာဂျင်တီးနားအတွက်ကြိုးစားခဲ့သလား အရာအားလုံးအလုပ်လုပ်လျှင်သိရန်
ဒီမှာ 2.0.1 ကနေ 2.0 ကိုလုပ်လို့ရလား ငါမဆိုဒရာမာမပါဘဲလုပ်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားပေးပေမယ့်ငါက 2.0 ကနေလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ရှိမရှိငါသိရန်ရှိသည်
တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားရင်သင် 2.0 ကိုပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် Droid အတွက်လား။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် alldroid ချည်ဖို့ link ကိုလည်းတန်ဖိုးထားလိမ့်မည်။
မင်္ဂလာပါ၊ မှတ်တိုင်ကနေခင်ဗျားဘယ်လိုဒီမှာရောက်ရှိနေတာလဲ (ငါထင်တယ်) ။ မင်းကိုမေးချင်ပါတယ်
1ºသင် wifi ချိတ်ဆက်ပြီး၎င်းတို့ကိုသင့်ကိုခေါ်သည့်အခါ၎င်းသည်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း
ငါကအဲဒါကို fuck ဆိုတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတယ်
ဝမ်းနည်းပါတယ်ဗားရှင်း ၂.၀.၁ ကိုအဆင့်မြှင့်ပြီးပါပြီ
စိတ်မကောင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်သမိုင်းမှတ်တိုင်ကိုဤနေရာတွင်သင်ပေးခဲ့သော megaupload ဖိုင်ဖြင့်သာဖော်ပြခဲ့သည်။ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုအချို့ရှိရမည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်တိုင်အရ version 2.0.1 နှင့်ဂျာမန်တွင်နေထိုင်သည်။ Nicomda … ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပြပါ။ သင်တင်သောအခါမှားယွင်းသောဖိုင်ရှိကြောင်း !! ငါ့ 2.1 ကိုလိုချင်တယ် !!
ဘယ် မင်္ဂလာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Lantino America သည်အလုပ်လုပ်သည်ဆိုလျှင်မည်သူမဆိုသိလား
2.- 3G မှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်ပါသလား
ငါတောင်အမေရိကနှင့်ဥရောပဗားရှင်းနှစ်ခုလုံးအတွက်တရားဝင်သည်ထင်တယ် ဒါပေမယ့်မှတ်တိုင်သာ။ ငါသူ့ကိုအခြားနည်းနည်းအမှားရှာတွေ့ပါပြီ။ ဥပမာ။ ၎င်းသည်စက်ရုံမှလာသည့်အက်ပလီကေးရှင်းအချို့ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး nandroid နှင့်အရန်ပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အထူးအကြံပြုလိုသည်။ တစ်ယောက်ယောက်ကဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမသိဘူးဆိုရင်နေ့လည်ပိုင်းမှာဒီစာအုပ်ကိုငါတင်မယ်။
Gabriel, 3g ဟာပြီးပြည့်စုံတယ်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာအကြောင်း၊ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းသည်စပိန်ဘာသာသို့ပြောင်းပြီးမက်ဆေ့ခ်ျများကဲ့သို့သောအပလီကေးရှင်းများမှလွဲသည်။
မွမ်းမံပြီးတဲ့အခါ၊ reboot လုပ်တဲ့အခါ၊ motorola M မှာရပ်တန့်သွားတယ်။ မိနစ် ၂၀ လောက်ကြာပြီ။ ငါဘက်ထရီကိုပြန်ဖြုတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပြီးပြီ။
ထို့အပြင်၎င်းသည်သီးခြားအမှုတစ်ခုဖြစ်ရမည်၊ ဥရောပသို့မဟုတ်တောင်အမေရိကတို့ဖြစ်သည်။ အထက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ nandroid backup ကိုကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေနဲ့လုပ်ခဲ့ပါသလား။ အဲလိုဆိုရင်တော့သင်ဟာအဲဒါကိုပြန်လည်ရယူဖို့လိုတယ်၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသင်ခန်းစာတစ်ခုတင်လိုက်တယ်။
ပြtheနာကငါ sd ကိုမဆက်သွယ်နိုင်လို့ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့၎င်းသည် motorola M နှင့်ချိတ်ဆက်ပြီး USB ကကျွန်တော့်ကိုဖမ်းတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
uff .. အမှန်တရားကကြည့်ရတာမကောင်းဘူး။ သင့်တွင် 2.0 သို့မဟုတ် 2.0.1 ရှိသည့်မည်သည့်ဗားရှင်းရှိသလဲငါ xk ကို update က 2.0.1 အတွက်သာဖြစ်သည်၊ post ၏အစတွင်ဖော်ပြသည်
သေရော! ငါအပိုင်းကိုမဖတ်ခဲ့ဘူးငါကအားလုံးကို 2.0 အတူတူ shit အားလုံးကိုစေလွှတ်ပုံရသည်
သမိုင်းမှတ်တိုင်မှ SD ကိုကျွန်ုပ်မည်သို့ရယူနိုင်သည်ကိုယခုသင်မသိပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒီလိုဆိုရင်၊ ငါဟာ personal rom ကိုရှာပြီးမွမ်းမံလို့ရတယ်
Tincho ငါဒီမှာငါ့အမှုအပေါ်အနည်းငယ်မှတ်ချက်ပေး။ ရုံအမေရိကန်တောင်ပိုင်းဗားရှင်း။ ငါ့အမှု၌ငါ root နှင့်အောက်ပါသင်ခန်းစာကနေ RDSLite နှင့်အတူ 2.0.1 သို့အဆင့်မြှင့်: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=en&sl=de&tl=en&u=http://www.nodch.de/motorola-milestone-update-2-0-1-mit-root-installieren/1648/comment-page-1&rurl=translate.google.com&twu=1&usg=ALkJrhi_aUF1en3N2ByGEp1Y2UdlzbmDIw#comment-20666
မူရင်းစာသားကိုဂျာမန်ဘာသာဖြင့်ပြန်ဆိုထားသောကြောင့်၎င်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာသို့ပြန်ဆိုထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏မှတ်တိုင် (Flash) ကို ၂ ကြိမ်ပြန်လည်လုပ်ပါ။ ထိုအခါငါသူတို့ကဒီမှာ post သောဖိုင်ကို load လုပ်ဖို့ရွေးချယ်ကြပြီးငါဗားရှင်းပြောင်းလဲမှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ငါ2နှင့်အတူဆက်လက်။ သင်အာဂျင်တီးနား၌ရောက်နေလျှင်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ အချက်ပြလက်ခံမှုသည်ဤနေရာတွင်သုံးသော freq အချို့ကိုသိသိသာသာကျဆင်းသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအရာကိုဖတ်ပြီးနောက်မှဖြစ်သည်။ Nicomda SBF ဖိုင် (၂) ခုအကြားမည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမဆိုကျွန်ုပ်သင်ဒီမှာကူးယူခဲ့သောလင့်သို့ကူးပြောင်းလိုက်သည်ကိုသတိမပြုမိပါ။ ပြီးတော့ဖုန်းပေါ်မှာ 2.0.1 လို့ပြောနေတယ်။
သင်သည်ဤ Tincho လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ပါကသင်၏ရည်မှန်းချက်ကို 2.0.1 ဖြင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။ nandroid နဲ့လုပ်ထားတဲ့ ၂.၀ backup ကိုပြန်သွားချင်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မည်သူမဆိုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျပုံကိုသိလျှင်ကျွန်ုပ်သည်ကျေးဇူးတင်ရုံထက်မကပါ။ ဗားရှင်း ၂.၀.၁ နှင့်အတူကျွန်ုပ်တွင်ဖုန်းမရှိပါ။
Nicomda သင်ကျူရှင်ကိုသင်လုပ်နိုင်လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တန်ဖိုးထားမည်ဖြစ်သော်လည်းဗားရှင်း ၂.၁ ကိုသင်မြင်လျှင်သင်အတည်ပြုနိုင်ပါသလား။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။
အဆိုပါ nandroid သင်ခန်းစာပြီးသားတင်ထားသည်။ အထက်ကပုံများသည်ကျွန်ုပ်၏ motorola မှဖြစ်ပြီး ၂.၁ သို့ပြောင်းလဲသွားပါကကျွန်ုပ်၏ terminal တွင်၊ ကျွန်ုပ်အတည်ပြုလျှင်၊ တောင်အမေရိက rom နှင့်မကိုက်ညီပါ။
သို့သော်လည်းငါသည်ဤတရားဝင် 2.1 rom မဟုတ်ဘဲတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ walpapers နှင့်အခြား interface ကိုတိုးတက်မှုများကိုသက်ဝင်စေတဲ့ 2.0.1 အပေါ်တစ် ဦး mod ဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ရှင်းလင်း။
Tincho သည် watts နည်းလမ်းအတွက်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်သင့်သည်
ဒီအချိန်မှာငါစမ်းသပ်နေတယ်၊ ​​ငါ bootloader ထဲဝင်ပြီး rom 201 ကို download လုပ်ဖို့စောင့်နေတယ်။
ကောင်းပြီ, ငါနောက်ဆုံးကဒီမှာမှ update ကိုအတူအလုပ်လုပ်ရှိသည်! ငါပြောသမျှအတိုင်းပြုလေ၏။
ကျွန်ုပ်၌တစ်ခုတည်းသောပြproblemနာမှာ 3g သည်ကျွန်ုပ်ကိုမဆွဲတင်နိုင်ပါ။ ယခုသူသည်စပီကာနားကပ်တိုင်းကြောက်လန့်စရာကောင်းသောဆူညံသံကိုဖြစ်စေသည်၊ ၎င်းသည်ယခင်ကမလုပ်ခဲ့ဖူးပါ၊ မည်သူကိုအဘယ်ကြောင့်နှင့်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုမည်သူသိသနည်း။
watts, သင်ကိုယ်ပိုင်အာဂျင်တီးနား၏ 2.0 ၏ backup လုပ်ထားရှိပါသလား မင်းရှိရင်မင်းအဲဒါကိုငါ့ဆီဖြတ်ပေးလို့ရမလား။
သတင်း၏ကိုယ်တွင် ၂.၁.၁ နှင့်အခြေခံထားသော MOD တစ်ခုဖြစ်သည် ၂.၁ ကိုယ်နှိုက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်အရေးကြီးသောပျက်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းရန်မှာထင်ရှားသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်ပါသည်။
xD ပေါ်လာပြီ။ ငါတည်းဖြတ်မယ်
မင်္ဂလာပါ၊ MegaUpload ဖိုင်တွင်စကားဝှက်တစ်ခုရှိသည်။ စကားဝှက်ကဘာလဲ?
rar pass ဆိုတာဘာလဲ
rar pass ဆိုတာဘာလဲ နှင့်အခြားအရာ .. ငါ 2.0.1 2.1 ကို install လုပ်ဖို့ ver 2.0.1 .. install လုပ်ပါပြီငါ XNUMX install လုပ်သကဲ့သို့ငါပြုသကဲ့သို့ငါ?
RSD lite ကိုသုံးပါသလား။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ် ၆ နှစ်လောက်နောက်ကျပြီးပြီဆိုတာသိပေမယ့်သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုပဲရှိပါသေးတယ်။ ငါ android6ကို update လုပ်ချင်တယ်။ ဒါပေမယ့် update ကို download လုပ်ဖို့ link ကမရှိတော့ဘူး။ ဘယ်သူ့ကိုမှရမလား? ကျေးဇူးတင်ပါတယ်